Basikety – CACC: laharana faha-8 ny MB2All | NewsMada
Basikety – CACC: laharana faha-8 ny MB2All
Par Taratra sur 26/11/2018
Niatrika ny lalao fiadian-toerana ny ekipa malagasy, MB2All, omaly tany Maputo, Mozambika, nandritra ny fiadiana ny amboaran’i Afrika, ho an’ny ekipa tompondaka sokajy vehivavy, taranja basikety. Eo amin’ny laharana faha-8 ny misy an’i Madagasikara, taorian’ny faheresena nanoloana ny ekipan’ny KPA avy any Kenya. Hita ho nanezaka mafy ireto mpilalao malagasy nanomboka tany amin’ny ampahefa-potoana voalohany. Nitarika tamin’ny isa 12 noho 6 ny ekipa Malagasy, saingy nanantombo kosa ry zareo Kenyanina nandritra ny ampahefa-potoana faharoa ka noverezin’izy ireo tamin’ny isa 24 noho 19 indray ny Malagasy. Nampitombo ny teknika teny ambony an-kianja ny ekipa malagasy tamin’ny ampahafefa-potoana fahatelo ka nitarika tamin’ny isa 39 noho 37. Tsy nanaiky lembenana anefa, tetsy ankilany, ny KPA avy any Kenya ka tsy nitsahatra nampitombo isa. Nisesisesy ny isa telo ka nanomboka nibanaka ny elanelanelana teo amin’ny roa tonta. Nivoaka mpandresy ny ekipan’ny Kenya ka isa 52 no ho 49 ny nandavoany ny MB2All.
Raha tsahivina,10 ny ekipa nandray anjara tamin’ity fifaninanana afrikanina amin’ny taranja basikety ity ary notsinjaraina ho vondrona roa. Ekipa fahaefatra tao amin’ny vondrona nisy azy i Madagasikara rehefa avy nifanandrina tamin’ny Lakers avy any Mozambika ka nibata ny fandresena tamin’ny isa 58 no ho 48. Nihintsana teo amin’ny lalao ampahefa-dalana kosa rehefa nifampitana tamin’ny ekipa kalaza Inter Clube avy any Angola. Isa mavesatra 78 no ho 46 ny nandavoan’ny Angoleizy ny ekipa malagasy tamin’izany.
Azo lazaina ho ratsy ihany ny vokatra, saingy ampy hakana lesona ny fiatrehana ity fifaninanana ity, raha ny nambaran’ny mpanazatran’ny MB2All. “Zava-dehibe ny fandraisana anjara tamin’ny lalao iraisam-pirenena toy itony”, hoy hatrany ny fanazavana.